The Rohingya News Bank : လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု GENOCIDE ကို လေ့လာခြင်း
ဂျီနိုဆိုက်ဆိုတာ မူလစကားလုံး လက်တင်ဘာသာစကား geno က လူသားမျိုးနွယ်၊ cide သတ်ဖြတ်ခြင်းဟု ဆိုလိုပြီး လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ခြင်းဟု အများက အသုံးပြုကြပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး နာဇီဂျာမနီတွေ ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို တုံ့ပြန် အရေးယူနိုင်ရန်အတွက် ဦးဆောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည့် ပိုလန်လူမျိုး ရှေ့နေ ရာဖဲလမ် ကင်က စတင် အသုံးပြုခဲ့ရာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရာဖဲလမ်ကင်က နိုင်ငံတကာ ရာဇ ဝတ် မှုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရန်အထိ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ အစပြုကာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်အဖြစ် ကုလသမဂ္ဂမှ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနှင့် လည်း ၁၉၄၈ ဒီဇင်ဘာတွင် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာအထိ နိုင် ငံပေါင်း ၁၄၇ နိုင်ငံမှ သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသဘောတူစာချုပ် အပိုဒ် ၂ တွင် ဂျီနို ဆိုက်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ဆို ရှင်းပြထားပါသည်။
ဂျီနိုဆိုက်ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံသားတစ်မျိုး၊ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ ဘာသာဝင် အုပ်စုတစ်စု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မ ဟုတ် တစ်ခုလုံး ပျက်စီးစေရန်အလို့ငှာ ကျူးလွန်သော အောက်ပါလုပ်ရပ် တစ်ခုခုကို ဆိုလိုသည်။
a. အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်လူများကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၊
b. အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် လူများကို ရုပ်ပိုင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်းထန်စွာ အန္တရာယ် ကျရောက်စေခြင်း၊
c. အုပ်စုလိုက် အသက် ရှင်တည်ရှိမှုကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် တစ်ခုလုံး ပျက်စီးစေခြင်းကို ဆိုးရွားစွာ သက်ရောက် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊
d. အုပ်စုအတွင်း မွေးဖွားမှုကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ်သော အတားအဆီးများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
e. အုပ်စုတစ်စုမှ ကလေးများကို အခြားအုပ်စုသို့ အတင်းအဓမ္မ လွှဲပြောင်းခြင်း။
အထက်ပါဖွင့်ဆိုချက်ကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ကျယ်ပြန့်ပြီး တိတိကျကျ ပြောဆို၍မရသောအချက်များ ဖြစ်နေ တာကို တွေ့နိုင်ပါမည်။ အထက်ပါဖွင့်ဆိုချက်ကိုပင် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုတရားရုံး (ICC) ဆိုင်ရာ ရောမ Statue တွင်လည်း ထပ်မံ အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဖွင့်ဆိုချက်များသည် သီးခြား အထူးတလည် မဖွင့်ဆို လျှင်တောင်မှ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနှင့် လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်များသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုကြသည် များလည်း ရှိသည်။ ထို့အပြင် လူသိများသော လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုဆိုသည့် စကားရပ်သည် အထက်ပါ ဖွင့်ဆိုချက်များထက်ပင် ပိုမို ကျယ်ပြန့်သည့်သဘော ရှိပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် အသီးသီး ထပ်မံ အနုစိတ် ဖွင့်ဆိုထားသည်များ ရှိပါသည်။ ဤဖွင့်ဆိုချက်တွင်တော့ အနည်းငယ် ကျဉ်းမြောင်းသည့်သဘော ရှိပါသည်။
အလားတူ အခြား အသုံးများသော စကားလုံးတစ်လုံးမှာ Ethnic Cleaning ဖြစ်သည်။ လူမျိုးတုံး ရှင်းလင်း ခြင်းဟု ပြောလျှင်ရမည်။ ဂျီနိုဆိုက်နှင့် အလဲအလှယ် သုံးလေ့ရှိကြသည်။ ဒီစကားလုံးအတွက်တော့ သီးခြား တရားဝင် သတ်မှတ် သဘောတူထားသည် မရှိသော်ငြား အတော်ပင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနေကြ ပါသည်။
ဂျီနိုဆိုက်ကို အဆင့်ရှစ်ဆင့်ဖြင့်လည်း တိုင်းတာကြည့်ကြသည်များ ရှိပါသည်။ အဆင့်အလိုက် ကြိုတင်တား ဆီးနိုင်သည်များကို အကြံပြုကြသည်။ သို့သော် အဆင့်များသည် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်။ တစ်ပြိုင်နက် တွေ့ရသည်များလည်း ရှိသည်။ အချို့က ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများ ဖြစ်ကြသည်။ အချို့က ထပ် ကာထပ်ကာ ဖြစ်နေနိုင်သည်။
(၁) အဆင့်ခွဲခြားခြင်း - လူတွေကို လူမျိုးအလိုက်ဖြစ်စေ၊ ဘာသာအလိုက်ဖြစ်စေ ခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိ ကအားဖြင့် ငါတို့နဲ့ သူတို့ (us and them) ဆိုသည့် မတူညီသည့် စည်းသားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရဝမ်ဒါတွင် ဟူတူနှင့် တွတ်ဆီများအကြား ခွဲခြားကြခြင်းမျိုး။ အစွန်းတစ်ဖက်သို့ ရောက်လာသောအခါ အကြမ်းဖက် မှု များ ဖြစ်လာတတ်သည်။ မတူကွဲပြားမှု၊ သည်းခံတတ်မှုများကို တွန်းအားပေးနိုင်သော အများနှင့်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ စနစ်တကျ ထူထောင်ကာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
(၂) တံဆိပ်ကပ်ခြင်း - အဆင့် ခွဲခြားထားသူများကို တံဆိပ်ကပ်လိုက်သည်။ လူဖြူတွေ၊ လူမည်းတွေ၊ ဂျူး
တွေ စသည်ဖြင့်။ အဆင့်ခွဲခြင်း၊ တံဆိပ် ကပ်ခြင်းလောက်ဖြင့်တော့ ဂျီနိုဆိုက် ဆိုသည့်အဆင့်ကို ရောက်မလာပါ။ အခြားသူများကို တစ်ဆင့်နိမ့် လူများအဖြစ် ဆက်ဆံသောအခါ အမုန်းတရားများ သွတ်သွင်းလာသောအခါမှသာ ဖြစ်လာသည်။ အခြားလူများကို နှိမ်ခေါ်သော စကားလုံးများကို ဥပဒေဖြင့် ပိတ်ပင်နိုင်သည်။ သို့သော် ယဉ်ကျေးမှုအရ မပြောင်းလဲနိုင်လျှင်တော့ မအောင်မြင်နိုင်။ ဟူတူဆိုသော စကားလုံးက နှိပ်သည်ဟု ယူဆကာ အစိုးရက တရားဝင် ပိတ်ထားသော အခြား ထိုအဓိပ္ပာယ်အတိုင်း အခြား အစားထိုး စကားရပ်တစ်ခု ပြောင်းလဲသုံးကြသည်သာ ရှိသည်။ ခွဲခြားခြင်းက ပျောက်မသွားနိုင်ပါ။
(၃) လူအဖြစ်မှ တစ်ဆင့်နှိမ့်ဆက်ဆံခြင်း - အုပ်စုတစ်စုမှ အခြား အုပ်စုတစ်စုကို လူလူချင်းဆိုသည့် တန်းတူ မသတ်မှတ်ဘဲ ကိုယ့်ထက် တစ်ဆင့်နိမ့်သူများ၊ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်သာသာလူများအဖြစ် ရှုမြင်ကာ ဆက် ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အပြုအမူများကို အမုန်းစကားများ၊ အမုန်းဝါဒ ဖြန့်ခြင်းများက ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အမုန်းစကားများကို ကြပ်မတ်စွာ ကိုင်တွယ် အရေးယူခြင်းသည် အလွန်ပင် အရေးကြီးသည်။ ဒီမိုကရေစီ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် ရောထွေးခွင့် မပြုသင့်ပေ။
(၄) အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း - လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုများသည် အဖွဲ့အစည်းဖြင့် စနစ်တကျဆောင် ရွက်ခြင်းများ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုရာတွင် နိုင်ငံတော်က ကျူးလွန်သည် သာမက အခြား လက် နက် ကိုင်အဖွဲ့များ၊ သမားရိုးကျ မဟုတ်သော အဖွဲ့များကလည်း ကျူးလွန်နိုင်သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ကုလသမဂ္ဂမှ ထိန်းသိမ်းရေးတပ်များ စေလွှတ်ခြင်း၊ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းကာ ဆောင်ရွက်ခြင်း များ ပြုလုပ်သင့်သည်ဟု နိုင်ငံတကာက ယူဆကြသည်။ လတ်တလော လုံခြုံရေးကောင်စီမှ ရခိုင်ပြည် နယ် အရေး အချက်အလက် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ဤသဘောဖြစ်မည်။
(၅) ဆန့်ကျင်ဘက် အုပ်စုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း - အုပ်စုအသီးသီး အတွင်းမှ အစွန်းရောက်သူများ ပိုပြီး အုပ်စု ကွဲပြားအောင် ဖန်တီးကြသည်။ သတင်းမှားများကို အသုံးပြုကာ အမုန်းကို ပွားစေကြသည်။ ကိုယ့်အုပ် စုအ တွင်းမှ အလယ်အလတ်သမားများကို ရန်ရှာခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် အသံတိတ်အောင် လုပ်ပစ်ကြသည်။ (ဥပမာ - မောင်တောတွင် မွတ်ဆလင်များက သတင်းပေးဟု ယူဆသည့် မွတ်ဆလင်များကို သတ်ဖြတ် ခြင်း မျိုး) အလယ်အလတ်သမားများကသာ ပြဿနာကို ပြေလည်စေမည့်သူများ ဖြစ်သည်။ ထိုအတွက် လုံ ခြုံ ရေး ခိုင်မာစေခြင်း၊ အစွန်းရောက်များကို အချိန်မီ တားဆီးခြင်းများကို ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။
(၆) ပြင်ဆင်ခြင်း - လူမျိုး၊ ဘာသာအရ ဘယ်သူတွေဟာ ပစ်မှတ်လဲဆိုတာ သတ်မှတ်ပြီး သိသာစေတဲ့ အ မှတ် အသားများ ဝတ်ဆင်စေခြင်း မျိုးဖြစ်သည်။ နာဇီများက ဂျူးများကို အဝါရောင် တံဆိပ်များ ဝတ် ဆင် စေခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ တချို့ အခြေအနေတွင်တော့ လူများကိုသီးသန့် တစ်နေရာတည်းတွင် သီးခြားစုပြုံ ထား ခြင်း မျိုး ဖြစ်သည်။ ဒီအဆင့် ရောက်လာလျှင်တော့ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု အရေးပေါ် အခြေအနေဟု ပြော၍ရမည်။ ဒီအနေအထားဆိုလျှင်တော့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှ ပါဝင်ပတ်သက်ကာ နိုင်ငံတကာ စစ်ရေး အရေးယူမှုများ ပါဝင်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။ ကိုဆိုဗိုသို့ နေတိုးတပ်များ ဝင်ရောက်ခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။
(၇) ရှင်းလင်း သုတ်သင်ခြင်း - ဂျီနိုဆိုက်ဟု အတိအကျ ခေါ်ဆို၍ရမည့်အဆင့်အဖြစ် အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အုပ်စုတစ်စုနှင့်တစ်စု အပြန်အလှန် သတ်ဖြတ်ကာ ပိုပြီး ဆိုးလာခြင်းမျိုးလည်း ရှိသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် စစ်ရေးအရ အရေးပေါ် ဝင်ရောက်နိုင်မှသာ တားဆီးနိုင် မည့် အနေအထားဖြစ်သည်။ အချို့အခြေအနေတွင် အန္တရာယ်ကင်းသော နယ်မြေ (Safe Zone) များ တည် ထောင်ပေးခြင်းမျိုး ပါဝင်မည်။ ယခု ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးတွင် မွတ်ဆလင် အသိုက်အဝန်းမှ တောင်းဆို သော Safe Zone ဆိုသည်မှာ ဤစဉ်းစားချက်မှ လာသည်လား စောကြောသင့်သည်။
(၈) ငြင်းပယ်ခြင်း - ဤအဆင့်သည် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတိုင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပြီး တိုင်း လိုက်ပါလာလေ့ ရှိသည်။ ဘယ်သူက လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို တာဝန်ခံမည့်သူ မရှိဘဲ ငြင်းပယ်လေ့ ရှိကြသည်ချည်းသာ ဖြစ်သည်။ ငြင်းပယ်၍ရအောင်လည်း ပြုလုပ်ကတည်းက လက်စ လက်န မကျန်အောင် ရှင်းလေ့ရှိကြသည်ဟု လေ့လာမှုများက ပြဆိုနေပါသည်။ သမိုင်းတွင်လည်း လူအ နည်း ငယ်ကိုသာ တရားရုံးဆီ ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ပြီး အပြစ်ပေး အရေးယူနိုင်ခဲ့သည်။
ခေတ်သစ်လူ့သမိုင်းမှာ အရုပ်အဆိုးဆုံး ပြစ်မှုများကို လူသားများ ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ အချို့ကိုတော့ ရုံး တင်စစ်ဆေးကာ တရားမျှတမှုကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့သော်လည်း အချို့ကတော့ လွတ်မြောက်နေခဲ့ကြသည်။ သမိုင်း အဖြစ်အပျက်များထဲမှ လူသိအများဆုံးဖြစ်ရပ်အချို့ကို ကောက်နုတ်ပြလိုပါသည်။
ဟိုလိုကပ် ဖြစ်ရပ်ဆိုး - နာဇီဂျာမနီများ ဂျူးလူမျိုးများအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သော လူသားဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင် သည့်ပြစ်မှု (Crime Against Humanity) အတွင်း လူအသက် သန်းပေါင်းမျာစွာ သေကျေခဲ့ရသည်။ ထိုဖြစ် ရပ် များအတွက် နုရင်ဘတ်ခုံရုံးကို ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး အပြစ်ပေး အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း အဓိက တရားခံများကို မပြစ်မပေးနိုင်ခဲ့ဟု ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။
ဘော့စနီးယားဖြစ်ရပ် - ကိုဆိုဗိုအရေးအခင်းဟု လူသိများသည့် ဖြစ်ရပ်အတွင်း ဆားဘီးယား ခေါင်းဆောင် များမှ လူအများအပြားကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ နိုင်ငံတကာတပ်များ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် အပြင် ရုံးတင် စစ်ဆေးခံကြရသည်။ အချို့က ခေါင်းခါငြင်းဆန်သော်လည်း အချို့ကတော့ အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြသည်။ ဒီလိုပေါက်ကွဲ အကြမ်းဖက်မှုမျိုး ဘာကြောင့်ဖြစ်လာရသလဲဆိုသည့် မူလဘူတအ ကြောင်းရင်းများကို လေ့လာသင့်လှသည်။
ရဝမ်ဒါ - ဟူတူနှင့် တွတ်ဆီ လူမျိုးစုနှစ်စုကြား အပြန်အလှန် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ကြရင်း လူ့အသက် ပေါင်း များစွာ (ခန့်မှန်း လူငါးသိန်းမှ တစ်သန်းခန့်) ကို ဒေါသများ အမုန်းတရားများအောက်တွင် စတေးခဲ့ကြ သည်။
ကမ္ဘောဒီးယား ခမာနီအုပ်စိုးမှု - ၁၉၇၀ ခုနှစ်များအတွင်း ပိုးပေါ့ဟု လူသိများသည့် အာဏာရှင်လက်ထက်၊ ခမာနီအုပ်စိုးမှုအတွင်း လူ့အသက် ပေါင်းများစွာ (ခန့်မှန်း လူသုံးသန်းအထိ) ကို သေကျေစေခဲ့သည်။
လူတစ်ယောက်အသက် သတ်သည်ပင် ရာဇဝတ်မှု မြောက်ပါသည်။ လူ့အသက်ပေါင်း များစွာကို မည်သည့် အကြောင်းရင်းခံပေါ်မှ သတ်သည်ဖြစ်စေ ရာဇဝတ်မှုထက်ဆိုးသော ရာဇဝတ်မှုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဂျီနိုဆိုက် ဖြစ်လာပါက နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးအရ အရေးယူခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ထိန်းသိမ်းရေးတပ်များ ဝင်ရောက်ခြင်းအထိ တွန်းအားပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုအတွက် မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ရမည်၊ ကာကွယ်ရမည်မှာ နိုင်ငံတိုင်း၏ တာဝန် ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အခြေအနေ တစ်ရပ်တွင် နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူအားလုံးကို ကာကွယ်ရမည့် နိုင်ငံ
တော် ကိုယ်တိုင် လူများ၏ ရန်သူဖြစ်သွားတတ်သည်များလည်း ရှိပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း မြင် မြင်ရာ လက်ညှိုးထိုးကာ ဂျီနိုဆိုက်ဟု အော်နေသည့်သူများ၏ စေတနာ အရင်းခံကို စေ့ငုကြည့်ဖို့ လိုပါသည်။ ဤမျှ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးကြီးမားသော စကားလုံးကို နိုင်ငံရေး ထိုးနက်ရုံမျှအတွက် လွယ်လွယ်သုံး နေခြင်းသည် ယနေ့ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းအတွက် ယုံကြည်မှုပျက်စရာသာ ဖြစ်သည်။ ဤစကား လုံးကို သုံးလိုက်ခြင်းဖြင့် မည်မျှလေးနက်သွားသည်ကို မြန်မာပြည်သူများအနေနှင့်လည်း သဘောပေါက် နားလည်သင့်ပါသည်။ မြန်မာပြည်အတွက် ပိုပြီး အသေးစိတ်ကျသော လေ့လာမှုများလုပ်ရန် လိုအပ်နေ သည်ဟုလည်း မြင်မိပါသည်။ အချို့အချက်များ (ဥပမာ အဆင့် ၁၊ ၂၊ ၃ တို့သည်) ဂျီနိုဆိုက် ဖွင့်ဆိုချက်ထဲ ပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ ငြိမ်းချမ်းသာယာသော အနာဂတ်လူ့ဘောင် တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် မဖြစ်မနေ တိုက်ဖျက်ကာကွယ်ရမည့် အချက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။